माधव नेपाललाई दोश्रो अध्यक्ष दिन ओली तयार - Desh Post
माधव नेपाललाई दोश्रो अध्यक्ष दिन ओली तयार
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०८:२८ मा प्रकाशित (1 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
देशपाेष्ट/काठमाण्डाैं । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउन वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दोश्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताएका छन् । ललितपुरको च्यासलमा जारी केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा बुधवार अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताको लागि हदै सम्मको लचकता अपनाउने र एकताको लागि नेता नेपाललाई दोश्रो अध्यक्ष बनाउन पनि आँफु तयार रहेको बताएका हुन् ।
“हामी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो छौँ । अन्तिमसम्ममा पनि एकताका लागि प्रयास जारी छ । माधव नेपालले मिल्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष मागे । मैले भनेको छु, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु,” बैठकमा ओलीले भनेका छन् ।
“मैले यति भन्दा पनि एकताप्रति इच्छा देखाइएको छैन, अनेक बाहना खोजिएको छ । त्यसपछि पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत चाहियो भनिरहेका छन् । किन ? हामीलाई पार्टीबाट निकाल्न ? ढुक्क हुनूस् कमरेडहरु, त्यसो हुन दिइने छैन । किनकि, यस्तो अभ्यास उनीहरुले पहिले पनि गरेका छन्,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत हाल्नु अपाराधिक काम भएको समेत बताए ।
“संसद्मा आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्धमा मत हालियो । यो अनैतिक, अराजनीतिक र आपराधिक कार्य हो । तर पनि मैले फिँजमा भए पनि केही घिउ लागिहाल्छ कि भनेर मही मथेको मथ्यै छु । म थाकेको छैन कमरेडहरू । एकताका लागि कुनै कञ्जुस्याइँ गरिएको छैन, गरिने छैन,” ओलीको भनाइ थियो ।